Blockchain News 10 EyoMqungu 2018 - Blockchain News
EyoMqungu 10, 2018 admin
Blockchain News 10 EyoMqungu 2018
Metatron ikhupha platform cryptocurrency transaction
Metatron, onguvulindlela yobuchwepheshe iingcali ukukhululwa olukhawulezisiweyo phezu 2000 apps linovuyo ukubhengeza ukukhululwa BitMeet ™, iqonga cryptocurrency transaction kunye neenkonzo tracking ixabiso kunye nendawo ekhoyo ngoku kwi Google Play.
iimpawu Bitmeet ™ 's ziquka ingxoxo, neendawo abasebenzisi abafuna ukuthenga nokuthengisa cryptocurrency, intengiso, cap market, iindaba zakutshanje yaye kakhulu. Ifumaneka ngoku ku Google Play, silindele ukuba upapashwe ukuze izixhobo iOS kwixesha elizayo.
"Bitmeet ™ lethu iqonga cryptocurrency kuya kunceda kusa quba kumakhamandela esembindini zebhanki eyake, ngokudala isizukulwana esitsha iingxaki yomthengi kunye nokungena kwiimarike zenkunzi ngenyaniso esekelwe entsimini kwinqanaba lokudlala,"Wathi CEO Metatron Joe Riehl.
Direxion, ProShares, VanEck ukurhoxisa Bitcoin imvuthuluka ETF
Direxion, ProShares kunye VanEck babephakathi neqaqobana benkampani ETF ukuba baye bayishiya imvuthuluka yokusungula bitcoin ETFs xa ecelwe U.S. nabalawuli.
Ngamazwi ezinxulumene, I Ima ufuna igalelo kwi imithetho ecetywayo utshintsho yi Chicago Board Options Exchange (CBOE) ukuba unako ukuvumela exchange ukudwelisa kane ETFs bitcoin. Cboe waba operator yokuqala sisananelo U.S. ukwazisa amakamva ezisekelwe lwemali digital, ukuba yenziwa nyanga odlule.
Kuze kuthi ga, akukho iimveliso exchange wasebenza ezinxulumene nemali yedijithali sele sivunyiwe yi U.S. nabalawuli.
Goldman Sachs: Ithiyori Bitcoin kungaba yindlela esemthethweni imali
Bitcoin kungaba yindlela esemthethweni kunye ngokubanzi yemali kodwa kakhulu kwithiyori, okwangoku, ngokutsho Goldman Sachs strategists.
“Ukusetyenziswa kwezi idola ngaphandle US - kunye dollarization ngokupheleleyo kwamanye amazwe - lubonisa kukho sele bafuna ukuba i medium yamkelwe kwihlabathi kunaniselwano noovimba ixabiso,” Wathi Goldman kaThixo Zach Pandl noCharles Himmelberg kunothi ngoLwesithathu.
Kuloo mazwe kunye neekona yenkqubo mali apho iinkonzo zemveli imali ezinikwa ngokwaneleyo, bitcoin (kwaye cryptocurrencies kakhulu ngokubanzi) ukuze banikele iindlela ezinokwenzeka.
Umzekelo, imithamo exchange bitcoin angena China emva lizwe waqalisa nokubotshwa phantsi ephumayo ezinkulu 2016.
Ukungayi, kukho imfuno bitcoin njengendlela imali ukwenza transactions. Kodwa njengenxalenye ipotifoliyo lwemali, cryptocurrencies are “zifune nge kwiqamza zakudala ngumyinge,” i strategists bathi. Baphawule ngokuba Korea kunye Japan kulawula bitcoin imithamo exchange, kodwa kwakhona amazwe kunye neenkqubo ozinzileyo emali.
Inyaniso kukuba cryptocurrencies kusekho ube eliphezulu bar regulatory ukusula kwiindawo ezininzi, i strategists bathi. Ukuze uqale nge, oorhulumente abakwazi umkhondo ngubani ukuhlawula okanye ukufumana ezimalini digital.
Goldman Sachs kubikwa ubalungiselela idesika cryptocurrency sorhwebo.
oyile backed cryptocurrency khong ukuba ilahlwe yipalamente Venezuela kaThixo
inkcaso-run Venezuela kaThixo epalamente ngoLwesibini ivalwa i "nemichiza" cryptocurrency ekhuthazwa yobusoshiyali nguMongameli Nicolas khong, ngokuthi kwenziwe iinzame mortgage ngokungekho oovimba oyile imali-ethangeni ilizwe.
Khong ngoLwesihlanu uthe urhulumente wakhe ukuba akhuphe phantse $6 billion of Petro njengendlela ukunyusa imali nzima ukuba bazikhwebule ukwayo zemali ebekwe yi Washington.
Iingcali Cryptocurrency bathi gwenxa Venezuela ngayo kuqoqosho yayo, kudityaniswe beswele imbali isigwebo Socialist Party ngayo intlonelo yamalungelo propati yabucala, Mhlawumbe ushiya abatyali bengenamdla ekufumaneni uPetros.
"Oku cryptocurrency, oku kuthengiswa phambili yeoli Venezuela,"Wathi mthetho Jorge Millan. "Kuyinto zenzelwe ukuba urhwaphilizo."
Khong uye rhoqo ngoyaba yowiso-mthetho ukususela iqela lakhe ezilahlekileyo ukulawula kulo 2016, kwaye pro-urhulumente kwiNkundla Ephakamileyo udubule phantsi phantse kuzo zonke umlinganiselo kwadlula ukusukela ngoko.
Khong sinethemba kuya kusebenza njengentsika yentlawulo a for nabathengisi abavela kwamanye amazwe kwaye siphephe iintlawulo ukulibaziseka ezikhule yondele kakhulu ukususela izohlwayo waya endaweni.
Fund Trat kaThixo Tom Lee: Bitcoin lula kabini ku 2018
Enye enkulu iinkunzi bitcoin Wall Street uthi le cryptocurrency ayikwazanga “lula kabini” okanye kathathu e 2018.
“Nokuba qho ngomngcipheko apha naphaya, Ndicinga bitcoin uza bebodlula ngokulula i S&P,” Lee uthe ngoLwesibili CNBC ngayo “Lekusasa Now.” “Ngokuqeshwa ixesha elide, indlela elula ukujonga bitcoin kukuba abe lilalela okanye ivenkile yexabiso,” uthe. “Ngoko njengoko millennials thola futhi imali, ukuba Uza ungayisebenzisa njengendlela replacement igolide.”
“Ukuba bitcoin ifumana 5 ekhulwini market legolide, oko cishe $ 50,000,” kuqhuba. Nantso a ngaphezu 200 ekhulwini emke apho bitcoin iku- urhwebo.
Ngokuqeshwa kufuphi elide, Lee ulindele bitcoin ufune Disemba yayo ephezulu. “Sicinga ukuba phakathi ku-2018, siya kuba yinxalenye yale ndlela apho, kwaye yiyo lonto sifumana [bitcoin ku $20,000],” uthe. “Ukuba bitcoin ndingekawuboni kuvuka ukusondela ukuba $20,000 kwinqanaba kwisiqingatha sokuqala kulo nyaka, Ndicinga kwisiqingatha sesibini 2018, siza kubona intshukumo kakhulu kunokuba,” Lee uthe. “Ngoko ke ndiyacinga bitcoin nangoku into kufuneka wawo wonke unyaka.”
Blockchain News 29 EyoMqungu 2018
Omnye yaseJapan ezinkulu ...
Blockchain News 30 EyoMqungu 2018
Gian yokuthumela Global ...
Post Previous:Ngubani owenza igalelo elikhulu kwishishini crypto? Top 7
Post Next:Blockchain News 11 EyoMqungu 2018